सामाजिक र राजनीतिक विकृति विसंगतिको विरोधमा सिर्जना भएका कतिपय नेपाली गीत मार्मिक छन्। तर केही गीतमाथि मनोरञ्जनका सट्टा संगीत क्षेत्रमै विकृति भित्र्याउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसैले अचेल बजारमा आएका यस्ता गीतसंगीतको विरोध हुन थालेकाे छ।
व्यंग्यको सीमा नाघेर भद्दा शब्दको प्रयोग र म्युजिक भिडियोमा प्रदर्शन गरिने उत्ताउलोपनले संगीतको मर्ममाथि नै प्रहार भएकाे टिप्पणी धेरैकाे छ। यसरी विराेध हुँदा कतिपय गीत युट्युबबाटै डिलिट गरेका घटना पनि छन्।
पछिल्लोपटक दुर्गेश थापाको ‘बीच्च बीचमा–३ (बेसार)’, प्रीति आलेको ‘फरिया लरिलै बरिलै’ गीतकाे यस्तै विराेध भएकाे छ। यी दुवै गीतले सामाजिक विकृतिमाथि व्यंग्य गरेका छन्।
वसन्त थापाको शब्द सिर्जना र दुर्गेश थापाको लय तथा स्वरमा रहेको बेसार गीतले शासनशैलीमाथि व्यंग्य गरेको छ।
कोरोनाले लग्यो बरै पल्लाघरे हरिलाई
मरेपछि रिपोर्ट आयो क्यार्नि बरिलै,
बेसार, बाध्यताको दबाई के छ र?
यसमा कोरोना महामारीपछि नेपालले भोगेको वास्तविकतामाथि व्यंग्य गरिएकाे छ। मानिसको मृत्यु भइसकेपछि कोरोना परीक्षण गर्ने र त्यसपछि रिपोर्ट पाजेटिभ आउने कुरा गीतमा उल्लेख छ। गीतमा भएका अन्य शब्दले पनि सत्ताबाट भइरहेको अनियमिततामाथि प्रहार गरेका छन्।
वाइड बडी नि पच्यो यहाँ तेत्तीस किला पचाइयो,
भित्रभित्रै अपराधीलाई किन बचाइयोरु
बेसार, भ्रष्टाचारको दबाई के छ र?
नेपाल वायुसेवा निगमका वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार तथा ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको विषयमा व्यंग्य गरिएको छ।
यसमै अर्को शब्द यस्तो छ :
क्वारेन्टिनमा पिपासुले बलात्कार गरेछन्,
कोरोनाले मर्नुभन्दा पहिल्यै मरेछन्,
बेसार, अपराधीको दबाई के छ र?
क्वारेन्टिनमै बलात्कार भएको र कोरोनाबाट जोगिन क्वारेन्टिनमा बसिरहेका व्यक्ति यस्ता व्यक्तिका कारण जिउँदै मर्नुपरेका विवशता गीतमा झल्काइएको छ। सुन्दा यी व्यंग्य स्वाभाविक लाग्छन्।
तर ‘बेसार’ गीतमाथि विकृति भित्र्याउन खोजेको आरोप लागेको छ। यसको कारण हो, म्युजिक भिडियो। म्युजिक भिडियोमा पुरुषले महिलाका पहिरन लगाएका छन्।
कतिपयले यो गीतले महिलामाथि भद्दा मजाक गरेको टिप्पणी गरे। कतिपयले तीजको भाकामा तयार भएको गीतले तीजमा विकृति भित्र्याएको भनेर विश्लेषण गरे। युट्युब ट्रेन्डिङमा लामो समय बसेको गीत विभिन्न प्रकारका विवादको चंगुलमा फस्यो।
प्रीति आलेको ‘फरिया लरिलै बरिलै’ गीतका शब्दमा तीजमा देखिएको विकृतिमाथि प्रहार गर्न खोजिएको छ।
एकनारायण भण्डारीको शब्द र लय भएको गीतमा मौलिक शब्द र लयको संयोजन गरेर प्रस्तुतिलाई अलि बढी नै आधुनिक बनाउन खोजिएको छ।
नारीकै हो तीजको पर्व, नारीकै हो दर,
छाडा केटा उफ्रिएर डिस्टर्ब नगर,
फरिया भिजायो मेरो दर्के पानीले,
मनको पहिरो बुझेन लाहुर जानीले
यो गीतमा नारीको पर्व तीजमा पुरुष हस्तक्षेप बढ्दै गएको प्रवृत्तिमाथि व्यंग्य गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो गीत आफैँमा विवादरहित हुन सकेन।
यसमा पनि गीतको म्युजिक भिडियोको शैलीलाई लिएर विरोधका स्वर सुनिए। कुनै रक वा हिपप गीतको कन्सर्ट जस्तो ‘थिम’ मा तयार पारिएको छ।
भिडियोमा फिचरिङ भएकी गायिका प्रीति आले र अन्य कलाकारको हाउभाउ, पहिरनलगायतका कुरा जोडेर यसको विरोध भएको हो।
तीज पर्वकै नाममा रहेका विकृतिको विरोध गर्दै नारी जागरणसहितको गीत निस्कियो सोफिया थापाको ‘अबको तीजमा नो व्रत प्लिज’। यो गीतमा पानी नखाई व्रत बस्ने, पतिको खुट्टाको पानी खानेजस्ता संस्कारको विरोध गरिएको थियो।
समाजलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्दै लैजाने र नारी–पुरुष समान हुन्छन् भन्ने सन्देश दिने यो सिर्जना सबैभन्दा बढी विवादको मारमा पर्यो। गीतले विकृति भित्र्याएको भन्दै केही धार्मिक संगठनले चर्को विरोध गरेपछि यो गीत युट्युबबाटै हटाइयो।
डेढ वर्षअघि गायक पशुपति शर्माले सार्वजनिक गरेको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ गीत विवादको चरम शिखरमा पुग्यो। सत्तारुढ दल नेकपाले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गीतको सार्वजनिक विरोध गरे।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकमा समेत यो गीतको विषय निकालेर विरोध भयो। यो गीतले नेपालमा शक्तिमा हुनेले कसरी लुटपाट मच्चाइरहेका छन् भन्ने कुरालाई व्यंग्य गरेको थियो। त्यसअघि पशुपतिकै एउटा तीज गीत जसले छुवाछुत प्रथाको विरोध गरेको थियो। उक्त गीतमा पनि केही शब्दले दलित समुदायमा चोट पुर्याएको भन्दै विरोध गरिएको थियो।
व्यंग्य सबैका लागि पाच्य नहुन सक्छ। शासन प्रणालीमाथिको व्यंग्यमा राज्य पक्ष रिसाउने, सामाजिक व्यंग्यमा त्यहाँका पीडक पक्षलाई चित्त नबुझ्ने कुरा त भइरहन्छन्। त्यसमा पनि पछिल्लो समय कतिपय गीतले परस्परमै विरोध निम्त्याउने काम गरेका छन्। कतै यस्ता सिर्जनाले संगीत क्षेत्रलाई बिटुलो बनाइरहेका त छैनन्?